Bitshares စျေး - အွန်လိုင်း BTS ပွောငျး
စျေးနှုန်းနှင့် ပွောငျး ကို Bitshares (BTS)
သငျသညျ (ကစျေးနှုန်းအရ) ပွောငျး လိုအပ်နေသောကြောင့်သင်ဒီမှာဖြစ်ကောင်းဖြစ်ကြ Bitshares (BTS) နိုင်ငံခြားငွေကြေးသို့မဟုတ်အွန်လိုင်း cryptocurrencies မှ. ထက်ပိုမိုပြောင်းလဲနိုင်ဖို့ထက်ပိုမိုလွယ်ကူဘာမှမရှိဘူး 170 ငွေကြေး နှင့် 2500 cryptocurrencies ဤတွင်, အွန်လိုင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ငွေကြေး ပွောငျး ကိုသင်အခုလုပ်ကူညီပေးပါမည်။ မရင့်ပြောင်းလဲဖို့အခမဲ့ခံစားရ Bitshares ဒါပေမယ့်လည်းမဆိုအခြားရရှိနိုင်ငွေကြေး။
Market ကဦးထုပ်: $73 580 036.00
သငျသညျမှာအားလုံးကြည့်ရှုရန်အဘို့အဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါကစိတ်ဝင်စားဖို့ဖြစ်လိမ့်မည် လဲလှယ်၏နှုန်းထားများ Bitshares တဦးတည်းစာမျက်နှာပေါ်တွင်.
Bitshares များ၏စျေးနှုန်းများ ကမ္ဘာ့အဓိကငွေကြေး
BitsharesBTS သို့ အမေရိကန် ဒေါ်လာUSD$0.115BitsharesBTS သို့ ယူရိုEUR€0.096BitsharesBTS သို့ ဗြိတိသျှ ပေါင်GBP£0.0831BitsharesBTS သို့ ဆွစ် ဖရန့်CHFSFr.0.106BitsharesBTS သို့ နော်ဝေ ခရိုဏာNOKkr0.959BitsharesBTS သို့ ဒိန်းမတ် ခရိုဏာDKKkr.0.713BitsharesBTS သို့ ချက်ခိုရိုနာCZKKč2.49BitsharesBTS သို့ ပိုလန်ဇလော့တီPLNzł0.436BitsharesBTS သို့ ကနေဒါ ဒေါ်လာCAD$0.144BitsharesBTS သို့ ဩစတြေးလျ ဒေါ်လာAUD$0.149BitsharesBTS သို့ မက္ကဆီကို ပီဆိုMXNMex$2.29BitsharesBTS သို့ ဟောင်ကောင် ဒေါ်လာHKDHK$0.893BitsharesBTS သို့ ဘရာဇီး ရီးယဲBRLR$0.643BitsharesBTS သို့ အိန္ဒိယ ရူပီးINR₹8.57BitsharesBTS သို့ ပါကစ္စတန် ရူပီးPKRRe.17.63BitsharesBTS သို့ စင်္ကာပူ ဒေါ်လာSGDS$0.153BitsharesBTS သို့ နယူးဇီလန် ဒေါ်လာNZD$0.161BitsharesBTS သို့ ထိုင်းဘတ်THB฿3.59BitsharesBTS သို့ တရုတ် ယွမ်CNY¥0.75BitsharesBTS သို့ ဂျပန်ယန်းJPY¥12.51BitsharesBTS သို့ တောင်ကိုရီးယား ဝမ်KRW₩128.38BitsharesBTS သို့ နိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်းရာNGN₦47.24BitsharesBTS သို့ ရုရှ ရူဘယ်RUB₽8.69BitsharesBTS သို့ ယူကရိန်း ဟီရီဗင်းညားUAH₴3.22
BitsharesBTS သို့ BitcoinBTC0.000002 BitsharesBTS သို့ EthereumETH0.00006 BitsharesBTS သို့ LitecoinLTC0.000516 BitsharesBTS သို့ DigitalCashDASH0.000444 BitsharesBTS သို့ MoneroXMR0.000436 BitsharesBTS သို့ NxtNXT1.89 BitsharesBTS သို့ Ethereum ClassicETC0.00597 BitsharesBTS သို့ DogecoinDOGE1.91 BitsharesBTS သို့ ZCashZEC0.000664
BitsharesBTS သို့ DigiByteDGB1.44 BitsharesBTS သို့ RippleXRP0.123 BitsharesBTS သို့ BitcoinDarkBTCD380235.15 BitsharesBTS သို့ PeerCoinPPC0.118 BitsharesBTS သို့ CraigsCoinCRAIG5027168980.16 BitsharesBTS သို့ BitstakeXBS0.0463 BitsharesBTS သို့ PayCoinXPY45.99 BitsharesBTS သို့ ProsperCoinPRC11496895.84 BitsharesBTS သို့ YbCoinYBC0.00006 BitsharesBTS သို့ DarkKushDANK3537637430.49 BitsharesBTS သို့ GiveCoinGIVE23879052655.78 BitsharesBTS သို့ KoboCoinKOBO8.85 BitsharesBTS သို့ DarkTokenDT0.106 BitsharesBTS သို့ CETUS CoinCETI1591936843.72
ငွေလဲနှုန်းကိုနောက်ဆုံးရေးသားချိန်: Sun, 18 Apr 2021 11:45:02 +0000.